Umthandazo wokuphelelwa lithemba umntu Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba unomdla wokufumanisa i- umthandazo wokuphelelwa lithemba umntu, qhubeka ufunda eli nqaku linomdla kwaye uya kuba nakho ukufumana yonke into ekufuneka uyazi.
1 Uyintoni umthandazo wokuphelelwa lithemba emntwini?
2 Umthandazo wokuphelelwa lithemba lomntu kunye namandla akhe
Uyintoni umthandazo wokuphelelwa lithemba emntwini?
Umthandazo sisicelo esiphakamiselwa emazulwini ngenjongo yokuba sinqule, sicele uncedo okanye sibulele into yasezulwini kunye namandla ayo okuthethelela thina okanye owomnye umntu nakweyiphi na imeko efunekayo. Kufuneka ithathelwe ingqalelo yeyiphi ingcwele enokuba yinto efanelekileyo ukusinceda kwimeko esifuna ukuyisombulula okanye ukuyivelisa, zininzi iingcwele esinokuya kuzo, kodwa ayizizo zonke ezizalisekisa imisebenzi efanayo okanye zingabathunywa iindawo ezifanayo.
Kukho imithandazo engenakubalwa kwaye, ngokulandelelana, izinto ezingenakubalwa ezinamandla kaThixo eziceliweyo ukuba zenze isicelo. Icandelo ngalinye linendlela yalo yokubhiyozela umthandazo, umzekelo irosari engcwele apho uBawo Wethu Osezulwini, Isichotho uMarys kunye noZuko kuYise kufuneka kuthiwe emva kokufunda imfihlakalo nganye. Isizathu sokwenza umthandazo siyahluka, isenokuba kukubanempilo, ezoqoqosho, ukukhokelwa ngokomoya okanye ubulumko.
Kukho imithandazo yamandla obuThixo ukuba angenelele kwaye akhanyise indlela yomntu ukuba sinqwenela njalo. Umzekelo, imithandazo yabantwana Abavukeli okanye ubuninzi bemali.
Kukho umthandazo wenzelwe ukuphelelwa lithemba ngendoda, ukuze umntu obandakanyekayo emthandazweni azive emthanda umntu awucengcelezayo. Ingcwele enikwa izipho ezinje ngokhuseleko, ukubopha, ukuxolela kunye nokulawula nayiphi na imeko ebomini okanye umntu obizwa ngokuba yi-Saint Cipriano.
Uyaziwa ngamandla akhe aphezulu kwaye imithandazo ebhekiswe kuye ihlala ijolise ekunqweneleni ukuba umntu abuye, athandane okanye abe naye nabani na owenza imithandazo efanelekileyo. Uhlala engulowo usombulula iimeko ezinzima kwindawo yothando ezinje, umzekelo, iingxaki zabantu abathandanayo abafuna ukwahlukana.
Imithandazo ngokubanzi ivumela i-reciter ukuba izive ikhuselekile kwaye ikhuselwe ngamandla angaphaya kokuqondwa. Kungenxa yokuba xa umthandazo usenziwa, ngaphandle kwenjongo yawo, sibeka lonke ukholo lwethu kwisicelo esisenzayo kwaye siyenzeka ngokukhawuleza okukhulu, okunika amandla ngakumbi.
Kwimeko yeSan Cipriano, amandla akhe anokusinceda kwiimeko ezifuna ukuthambisa, ukuqiqa okanye ukulawula imeko okanye umntu. Phakathi kwamawaka emithandazo lo ongcwele anayo umthandazo wokuphelelwa lithemba umntu. Unokuba nomdla umthandazo kwiSigramente Esikelelweyo.
Umthandazo wokuphelelwa lithemba lomntu kunye namandla akhe
Apha ungafunda umthandazo oza kuphakanyiswa ukuze uSaint Cyprian akwazi ukukuthandazela kwaye akuncede nasemthandazweni, kuya kufuneka ucengceleze oku kulandelayo:
Ngamandla amakhulu eSan Cipriano kunye namandla emiphefumlo emi-3 ejonge iSan Cipriano (igama lakhe elipheleleyo) liza kuza emva kwam (igama lakho elipheleleyo), uya kufika ekhasa nothando, ezele luthando, Ukulangazelela ukubuyela ecaleni kwam, ukuxolisa ngokundixokisa, ukundicela xa ndithandana kwaye kamva emtshatweni, ngokukhawuleza.
I-Saint Cyprian! Susa ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo (igama lakhe) kulo naliphi na ibhinqa anokutsalwa lilo okanye alikhohlisayo. Menze andikhangele namhlanje, ngalo mzuzu ndilangazelela kakhulu ukuba abe secaleni kwam.
Ngamana anganokholo lokuba ndingu (igama lakho elipheleleyo) kwaye ndiya kuhlala ndingumfazi ogqibeleleyo kuye, (igama lakhe) eligcina kwiingcinga zakhe ngalo lonke ixesha kwaye aqiniseke ukuba akakwazi, okanye angaphila ngaphandle kwam.
Ukuba ngoku naphina apho akhoyo, nokuba ngubani (igama lakhe elipheleleyo), unqwenela; ndibone, undive, uphefumle ivumba lam, undiphulule ngothando, unganga ngothando, undiphuze ngobumnene, undijonge ekuphumleni kwam, undikhusele ngalo lonke ixesha, undikhusele njengobuncwane bakho obukhulu, kwaye undithande iiyure ezingama-24 usuku ubomi bakho bonke.
Ummangaliso weSan Cipriano, yenze (yithi igama lakhe) uzive ubusemzimbeni wam kunye nasemzimbeni, umnqweno ongalawulekiyo, njengoko engazange azive okanye azive omnye umfazi.
Ukuba uziva inkanuko kuphela ngam, ukuba kuphela ndim umzimba wakhe ongalawulekiyo kubo bonke ubuqaqawuli bawo kwaye unoxolo kuphela kwaye uzive uxolo ngelixa ephilile nam.
Ndinombulelo ongazenzisiyo kuwe, onamandla nosikelelweyo uSanta Cyprian, ngokuba sele ndisebenza kwisicelo sam, ke ndiyathembisa ukuveza, ngalo ukholo lunye olwenze ukuba ndize kuwe kwaye ndisaziva ngalo mzuzu, Igama lakho uSanta Cyprian! Ndiza kuyenza ukubuya ngenxa yenceba enkulu endiyaziyo ngokuqinisekileyo, uyandinika, ngokuthambisa nokulawula (igama lakhe) umbuyisele kum, ngothando olupheleleyo, onothando, othembekileyo, oqondayo, ozinikeleyo, onyanisekileyo kwaye unyanisekile.
Amandla omthandazo okanye umthandazo axhomekeke ngokupheleleyo kukholo esinalo xa sisenza, kuba, ukuba asikholelwa kumazwi esiwathethayo, ilizwi lethu alizokuviwa kwaye ke akukho mntu uya kuphuma asithethelele. Ukusilela ukuqonda ukuba ukholo lwethu ngumqhubi obalulekileyo kukhokelele ekubeni abantu bayeke ukukholelwa kubungcwele be-Saints ngokucinga ukuba abaviwa. Masikhumbule ukuba nayiphi na indawo ifanelekile ukwenza umthandazo okoko siziva sikhululekile.
Kwangokunjalo, enye indlela yokwenza ukuba iminqweno yethu izaliseke kukusebenzela ukuyenza ukuba yenzeke, nangona amandla kaThixo eyimbumba enkulu, izenzo zethu zimisela ubukhulu becala okwenzekayo kwaye kungenzeki kubomi bethu, luxanduva lwethu ukuthatha inyathelo kwaye uthathe amanyathelo ngokufanelekileyo.
USaint Cyprian uya kuva umthandazo wokuphelelwa lithemba umntu, kuphela ukuba siyathemba ukuba uncedo lwakho luya kusinika ithuba lokusondela kwinjongo zethu.